Magweta Emitero yepasi rose muNetherlands - Law & More
Mitero muNetherlands ine chekuita nemunhu wese angave anogara kana anobata neNetherlands. MaNetherlands neEuropean (EU) nyika dzese dzine maitiro akaomarara ekubhadhara mutero ane mirairo yakaoma nezvibvumirano zvepasi rose. Dutch mutero mutero, semuenzaniso, anoziva yakawanda mhando dzakasiyana dzemitemo nemitero, senge mutero wemitero, wage mutero, mutero unodzokera uye mutero wekambani. Pamusoro pezvo zvese izvi zvakambotaurwa masisitimu, mirau nezvibvumirano zvinogona kuve nechokuita kuDutch tax tax system.
KUMASHURE MBERI NENYIKA KURONGA
Mitero muNetherlands ine chekuita nemunhu wese angave anogara kana anobata neNetherlands.
MaNetherlands neEuropean (EU) nyika dzese dzine maitiro akaomarara ekubhadhara mutero ane mirairo yakaoma nezvibvumirano zvepasi rose. Dutch mutero mutero, semuenzaniso, anoziva yakawanda mhando dzakasiyana dzemitemo nemitero, senge mutero wemitero, wage mutero, mutero unodzokera uye mutero wekambani. Pamusoro pezvo zvese izvi zvakambotaurwa masisitimu, mirau nezvibvumirano zvinogona kuve nechokuita kuDutch tax tax system.
Asati atanga bhizinesi muNetherlands munhu wese muzvinabhizinesi anofanira kurairwa pamusoro peDutch mutero zvinhu uye mutero weDutch. Ihwohwo hunyanzvi hwekushandisa zvakazara kushandisa mutero mitero kudzikisira kumanikidzwa kweDutch mutero kune zvishoma.
Chii chinogona Law & More kukubatsira?
Law & More vateresi vemitero vanobatsira kukudziridza chimiro chakakodzera chekambani kuti vafarire kwazvo kunakidzwa nemitero yeDutch. Netherlands inopa zvinobudirira mutero zvibvumirano kudzimba dzemarudzi akawanda emakambani ane rubatsiro kubva kune dzimwe nyika. Kutsiva kugadzirwa kune dzimwe nyika kunogona kutungamira pamitero. Kutaurisa kaviri kunogona kushoma nekuda kwezvibvumirano zvakawanda zvemutero iyo Netherlands yakapinda mairi. Zvakare maDutch ekunze mutero unogona kudzivirirwa mune dzakawanda kesi
Law & More, nekubatana kwayo nevapi vezvemitero uye pamwe nevatengi vayo, vanotarisa mune izvo sarudzo idzo dzemitero yeDutch neEU dzinopa. Kana zvichidikanwa, isu tichafambidzana nevapi nevapi vemitero vakavimbika uye vanyori vezvinyorwa muNetherlands uye mune mamwe matunhu kuti vape zvakanakisa zano uye mhinduro kune vatengi vedu vechiDutch nevekunze.